Macallin iskuul oo abaal marin ahaan u helay $1 milyan oo doolar! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Macallin iskuul oo abaal marin ahaan u helay $1 milyan oo doolar!
Macallin iskuul oo abaal marin ahaan u helay $1 milyan oo doolar!
Peter Tabichi oo ah macallin iskuul ayaa abaal marin ahaan u helay $1 milyan oo doolar
Kenya (Halqaran.com) – Peter Tabichi wuxuu isu taagay horumarka waana tusaale caalami ah dhanka waxbarashada iyadoo wax-qabadkiisa iyo deeqsinimadiisa ay u soo jiiday in uu hanto qalbiyada adduun weynaha isaga oo ka helay martiqaad iyo casuumaad Aqalka Cad ee Mareykanka.
Peter wuxuu ka soo jeedaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nakuru iyadoo dukaamada iyo gaadiidka dhex mara waddooyinka magaaladiisa ay ku xar dhan yihiin boorar ay ku taageerayaan wax-qabadka iyo shaqadiisa, waxaana loo doortay macallinka ugu wanaagsan adduunka.
Macallinkan oo dhiga maadooyinka Xisaabta iyo Sayniska inta ugu badan ardaydiisa waxay ka soo jeedaan qoysas sabool ah iyagoo qaarkood la sheegay in ay soo lugeeyaan fogaan aad u dheer si ay u soo gaaraan iskuulka, tani waxay ku qaaday Peter in uu sameeyo wax ka weyn kaliya in ay damaanad u helaan helidda buugaagta muqararada ay wax ku baranayaan isagoona u sameeyay xirfad iyo hal-abuur ay ku maareeyaan noloshooda.
Macallinkan ayaa abaal marin ahaan u helay lacag gaareysa $1 milyan oo doolar, lacagtaas oo la siiyo macallinka ku guuleysta macallinka ugu wanaagsan adduunka.
Macallin iskuul oo abaal marin ahaan u helay $1 milyan oo doolar